Burma ( The Power of People): အနာပေါ် ဒုတ်ကျ။ Burma ( The Power of People): အနာပေါ် ဒုတ်ကျ။
ဘာတဲ့ …. အနာပေါ်တုတ်ကျ …. အေးနေ၀င်းတို့ နဲ့ဖက်ပေါင်းနေတာ သိသွားလို့ဂိုရှယ်လေးက ရေးလိုက်တဲ့ ဟိုတယ်ပေါ်က တစ်ညတာကိစ္စ လူသိရှင်ကြားဖြစ်သွားလို့ပြန်တုန့် ပြန်ရေးသားတဲ့ သန္တာလှိုင်။
အာဏာရူးအသိုင်းအ၀ိုင်း အထူးသဖြင့် အာဏာရူးကြီး နေ၀င်းရဲ့ မျိုးဆက်တွေနဲ့ငယ်သူငယ်ချင်းမို့ ပါဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ဆက်ပြီး ဖက်ပေါင်းကာ အမှန်ဖော်ထုတ်နေသူတွေဘက်ကို ရမ်းတာထက်၊ ကိုယ့်မိသားစု ကိုယ့်သိက္ခာကို စဉ်းစားပြီး ပိုးဖလံမျိုး မီးကို တိုးတာမျိုး မလုပ်ဖို့သတိပေးလိုပါတယ်။
တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူထူထုအကျိုး ထိခိုက်နစ်နာအောင် လုပ်ခဲ့တဲ့ လုပ်နေတဲ့သူတွေနဲ့ကင်းကင်းရှင်းရှင်း မနေနိုင်ကြဖူးဆိုရင်တော့ ပြည်သူလူထု သိအောင် ဖော်ထုတ်ကြရမှာ ဖြစ်သလို၊ ပြည်သူလူထုရဲ့ဒဏ်ခတ်ခြင်းကိုလည်း အဆိုပါသူတွေပါ ကြုံတွေ့ ရမှာပါ။